HobbyZone မှအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစီစဉ်သူ - ၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်မဟုတ်လော။ - ပြန်လည်သုံးသပ်
စံပြကမ္ဘာ စမ်းသပ်မှုများနှင့်တင်ပြချက်များ 2018-08-29 | 4
မော်ဒယ်လ်နှင့် DIY ဝါသနာအိုးများနည်းတူကျွန်ုပ်သည်ဝါသနာပါရာများကိုစီစဉ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးမူပိုင်ခွင့်ကိုရှာဖွေရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ မော်ဒယ်လ်သို့မဟုတ်အလားတူအနုပညာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားပြီးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်သောနေရာသည်အခြေခံနှင့်အဓိကပြissueနာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ စားပွဲပေါ်ရှုပ်ပွနေခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မလိုအပ်သောအချိန်ကိုဖြုန်းတီးနေသောကိရိယာများကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင့်ကိုအလုပ်မှထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ ငါပြီးသားအမျိုးမျိုးသောဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်ခဲ့ကြရတယ်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုငါဖန်တီးခဲ့တယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ပြင်ဆင်တယ်၊ အဲဒါကတကယ်တမ်းမှာများပြားလှသောရန်ပုံငွေများနှင့်အချိန်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါ၌ကောင်းသောအယူအဆပုံရသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမျိုးမျိုးသောသေတ္တာများ၊ သေတ္တာများနှင့်သိုလှောင်ထားသည်မှာ၎င်းသည်အလုပ်၏အစနှင့်အဆုံးတွင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုထုပ်ပိုးရန်နှင့်ထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ အလုပ်သူ့ဟာသူစဉ်အတွင်းရှုပ်ထွေး၏ကိစ္စ။ နောက်ဆုံးတော့ငါဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောဖြေရှင်းနည်းများရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည်။
HobbyZone - ပိုလန်မှအမေရိကန်သို့လား၊ အမေရိကန်မှပိုလန်သို့လား။
တကယ်တော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာကျဆင်းသွားတာပါ။ နောက်ခံတွင်မြင်နိုင်သော WSM စနစ်၏ module များနှင့်ဒြပ်စင်များသည်သံလိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မတူညီသော module ၃၀ နီးပါးရှိပြီး၎င်းတို့ကိုရာနှင့်ချီ။ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
HobbyZone သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိဖြစ်ပြီး ၁၀၀% ပိုလန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဝိရောဓိအားဖြင့်ဆိုရသော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမော်ဒယ်လ်အုပ်စုများနှင့်ဖိုရမ်များတွင်အသင်းဝင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားဆွေးနွေးမှုအဖွဲ့များ၊ browsing galleries နှင့်ဗီဒီယိုမော်ဒယ်လ်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အာရုံစိုက်မိသည်။ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်မှဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီကနေငါ HZ ကိုအရင်ကြည့်လိုက်တယ်။ လောလောဆယ် HobbyZone မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ထုတ်လုပ်သော Workshop Modular စနစ်များအတွက်တကယ့်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေသည်။ ၎င်းတို့ကိုယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Youtubers နှင့်မော်ဒယ်ဘလော့ဂါများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုမော်ဒယ်လ်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာ "ဖက်ရှင်" တွေလို့ပြောနိုင်တယ်။ ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်“ ကားဂိုဒေါင်” အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်းလေးနှစ်မပြည့်မီတွင်လူကြိုက်များလာခြင်းကသူတို့ကိုအပြည့်အဝထုတ်လုပ်သည့်ခန်းမသို့ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။ လောလောဆယ်သူတို့သည်တောင်အာဖရိက၊ အာရှနိုင်ငံများနှင့်သြစတြေးလျသို့ပင်တင်ပို့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပိုလန်လုပ်ငန်းရှင်များသည်သူတို့၏တောင်ပံများဖြန့်ကျက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၌ ၀ မ်းသာပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကဲ့သို့ပိုလန်ထုတ်ကုန်များကိုသူတို့တန်ဖိုးရှိသည့်အခါတိုင်း ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ အတိအကျငါစမ်းသပ်ပြီးသော HobbyZone ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမည်သို့ရှိသနည်း။ စမ်းသပ်ပြီးသားထုတ်ကုန်တွေကိုကြည့်ရအောင်။
OM13 မှိုမော်ဒယ်လ် - ရိုးရှင်းသောကြောင့်၎င်းသည်တောက်ပပါသည်
သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်ကြရအောင် - ဘောင်များစွာပါ ၀ င်သည့်ပလတ်စတစ်မော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုးကိုဓာတ်တိုးခြင်းသည်ဘောင်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားနေခြင်း၏ရှုထောင့်မှဆိုးဝါးသောနာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုငါကတ်ထူသေတ္တာထဲမှာရှာခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးကိုစားပွဲပေါ်ပြန့်နှံ့စေဖို့နေရာသိပ်များလွန်းလို့ပါ။ ဤတွင် HobbyZone သည် frame များ၊ ညွှန်ကြားချက်များသို့မဟုတ် decals များအတွက်ရိုးရှင်းသောရပ်တည်ချက်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ပြthanksနာကိုအလွန်သေးငယ်သောinရိယာတွင်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုပုံများတွင်မတွေ့ရသော်လည်း module base ၏အရွယ်အစားမှာ ၃၀ × ၁၅ စင်တီမီတာသာဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် HZ မှပရိဘောဂများ၏အရွယ်အစားသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနည်းငယ်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာငါသီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုခေါက်ပြီးနောက်၎င်းတို့သည်အလွန်သေးငယ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့ဓာတ်ပုံများအတွက်ပိုကြီးတဲ့ထင်ရှား။ , ဒါကပေါင်းလားသို့မဟုတ်အနုတ်လား။
ငါကအပေါင်းထည့်စဉ်းစားပါ။ ပြီးတော့ HobbyZone Modular Workshop System ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများကိုအနိမ့်ဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မည်မျှထုပ်ပိုးနိုင်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအနည်းငယ်သာအိမ်တွင်ဝါသနာပါရန်နေရာများစွာရှိသည်။ အများစုသည်သင်အရာများစွာကိုတင်ထားရမည့်သီးခြားစားပွဲခုံတစ်ခုသို့ဆင်းလာသည်။ သေးငယ်သည့် module များ၏အရွယ်အစားနှင့်၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများကိုခွဲခြားခြင်းဖြစ်နိုင်ချေသည် HZ ၏တီထွင်ကြံဆမှု၏မှော်တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အားညံ့ဖျင်းသောအဆောက်အအုံများအဖြစ်ပေါင်းစပ်ရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်ထိရောက်သောစနစ်ရှိသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထိုထက်ပိုသည်။ မှိုများအတွက် module ကိုပြန်လာ .. ကျနော်တို့ဘောင်သို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများအတွက် 15 အခန်းတစ်ခန်း, 16 မီလီမီတာတစ်ခုချင်းစီရှိသည်။ ၎င်းသည်ဥပမာအားဖြင့်လက်စွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်ဒယ်လ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
အခြား slot တစ်ခုစီကို frames များကိုနေရာချရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း module ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ အသုံးဝင်သောအချက်မှာစတစ်ကာမှတ်စုများကို သုံး၍ ခေါက်ထားသောမော်ဒယ်ထုတ်လုပ်သူ၏နံပါတ်၊ ဥပမာ - A frame, B frame စသည်တို့နှင့်အညီ frame များကိုမှတ်သားရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကော်နှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ငါ frames များကိုကျော်ကျသို့မဟုတ်လဲကြဖို့လိုတဲ့သဘောထားကိုရှိသည်သတိထားမိကြပြီမဟုတ်, အခွအေနေသူတို့ slat ၏ဒေါင်လိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆန့်ကျင်ဖိအားပေးနိုင်အောင်သူတို့ကအဆုံးသို့ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ frames များကို 1/35 စကေးမော်ဒယ်ကနေခဲ့ကြသည်။ 1/24 အကြေးခွံများနှင့်ပိုကြီးမားသောဘောင်များသည်ကြီးမားပါကအမြောက်အများထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီးစားပွဲခုံပေါ်တွင်အိပ်နေသော်လည်းဒေါင်လိုက်ရပ်နေနိုင်သည်။
မှိုအလွယ်တကူ sort ဖို့ဘယ်လို။ ဆာ ကျွန်တော့်ရဲ့ module တွေကိုသီးခြားစီ ၀ ယ်ထားတဲ့သစ်သားခြေထောက်ပေါ်တင်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အောက်မှာအရည်ပျော်ပစ္စည်းငွေ့တွေစုဆောင်းတဲ့လေဝင်လေထွက်ကောင်းတယ်။
ဒီဇိုင်းသည်အခြား HobbyZone ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖြူရောင်၊ Matt နံရံများဖြင့်ဖုံးထားသည့်ပျဉ်ပြားများနှင့်စင်ကြယ်သော၊ ဆေးကြောထားသော MDF ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအေးမြပြီးခေတ်မီပုံရပြီး MDF ကုန်ကြမ်းသည်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမှဖုန်များနှင့်ခြစ်ရာများနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည့်တိုင်၎င်း၏“ အလုပ်ရုံ” ပုံစံကိုဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကအဖြေကောင်းတစ်ခုပါ။ ဒါဟာအစ, ရှေးကသြော, ဆန့်ကျင်ပေါ်အတော်လေးခေတ်မီမကြည့်ပါဘူး။ ထိုမှိုများအတွက်စည်းရုံးရေးမှူး၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ? PLN 40 ထက်နည်းသည်။ မဟုတ်ပါ။
OM07a - Brushes နှင့် Tools for Module
အသုံးဝင်သောအရာ၏တစ် ဦး ငရဲ။ အပေါ်ပုံသည်အခြေခံအားဖြင့်မှတ်ချက်မလိုအပ်သော်လည်းခြောက်သွေ့သောအချက်အလက်များ။ nozzles ၅ ခုကျော်လောက်အတွက်၊ ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးကိုင်ထားနိုင်တဲ့ module တစ်ခုရတယ်။ ထုတ်လုပ်သူမှအချင်း ၁၃၁ တွင်းရှိသောမတူညီသောအချင်းအမျိုးမျိုးကိုထည့်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပထမတစ်ချက်တွင်ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။ အတိအကျဖော်ပြထားသည်အတိုင်း:
- 10 x 14 မီလီမီတာအပေါက်
- 26 x 10 မီလီမီတာအပေါက်
- 81 x ကို 8 မီလီမီတာအပေါက်
- 14 x ကို3မီလီမီတာအပေါက်
တွင်းကြီးများ၊ ခဲတံများ၊ ခဲတံများကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုအလွယ်တကူနေရာချနိုင်သည်။ လှံတံနှင့်လက်သည်းခွံတောင်ကျွန်ုပ်၏ပုံသက်သေနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေဟာတိကျသောဖိုင်များနှင့်စုတ်တံများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှများစွာသောသင်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ စုတ်တံများကိုအလွယ်တကူစုစည်းနိုင်သည်။ ဥပမာရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းအတွက်ဘယ်ဘက်၊ ပန်းချီအတွက်ညာဘက်၊ အလယ်တွင်အသေးစိတ်အတွက်။ ထို့အပြင်ကတ်ကြေးဆွဲခြင်း၊ ပလတ်စတစ်နှင့်မော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုးအတွက်ဆွဲချဘားတစ်ခု။ ၎င်း၏ဘေးတွင်သို့မဟုတ်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းအောက်တွင်အချင်း ၃ မီလီမီတာအောက်အသေးများနှင့်အလွန်သေးငယ်သောအပေါက်များရှိသည်။ ရှည်လျားသောပစ္စည်းများကိုမေ့နေကြသည်။ အရှည် ၂၈.၅ စင်တီမီတာအထိရှိသော gadget များသည်ရှေ့မျက်နှာပြင်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ခုလုံးသည်ယခင်အတိုင်းကဲ့သို့၊ ၃၀x ၁၅x ၁၅ စင်တီမီတာဖြစ်ပြီးပြင်ပအတိုင်းအတာများဖြင့်ရေတွက်သည်။
ဒီ module သည်မော်ဒယ်လ်တွေသာမကအနုပညာပန်းချီဆရာများအတွက်ပါအသုံး ၀ င်ပြီးအရေးအကြီးဆုံး DIY ဒါမှမဟုတ်လက်သမားတန်ဆာအမျိုးမျိုးအောက်မှာလဲအစားထိုးမရနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဝက်အူလှည့်ကိရိယာများ၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အမြဲတမ်းအလုပ်ခွင်ရှိသည်အဖြစ်, သင်တွေ့ရှိခဲ့အဖြစ်အရေးအပါဆုံး drill -bits နှင့်ဝက်အူလှည့ sort နိုင်ပါတယ်။ ငါဖြစ်ကောင်းဒီရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဤကဲ့သို့သောအခြား module တစ်ခုနှင့်အတူတပ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ toolbox တစ်ခုရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လိုအပ်နေသောဝက်အူလှည့်သည်၎င်းရဲ့အောက်ခြေမှာဘယ်လောက်အထိတည်ရှိနေသည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ module ထဲမှာရှည်လျားသောပစ္စည်းများအဘို့အပေါက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
ငါ့အမှု၌, ရှည်လျားသောအခန်းမကြာခဏအသုံးပြုဖိုင်များနှင့် segment ကိုဓါးများအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်
သေးငယ်သော caliber ကိုမမေ့သေးပါ။ ဤတွင်သင်သည်အသေးစားကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်မော်ဒယ်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်နိုင်သည်
DIY ဝါသနာပါသူတိုင်းအတွက်တစ်ခုလုံးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ gadget တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားလိုအပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကိရိယာများကိုစုစည်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
HobbyZone - အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ modular စနစ်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော module နှစ်ခုသည် Modular Workshop System အကွာအဝေးနှစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ထိပ်တွင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပန်းချီ၏စင်မြင့်တွင်စက္ကူလိပ်တစ်ခုအတွက်မော်ဒယ်လ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အံဆွဲများ၊ အခင်းများနှင့်ပြတင်းပေါက်များပါ ၀ င်သည့်မော်ဂျူးများကဲ့သို့သောရှုထောင့်တစ်မျိုးတည်း၏ရှုထောင့်များရှိမော်ဂျူးများရှိသည်။ ။ အဆိုပါ module တွေအလွန်လိမ္မာပါးနပ်ထားရှိ, သေးငယ်တဲ့သံလိုက်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဤအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုလွယ်ကူသည့်အဆင့်မှအလွန်အဆင့်မြင့်သောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများတွင်မဆိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ အကွာအဝေးတွင်ထောင့်များအပါအ ၀ င်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောတည်ဆောက်မှုများစွာပါ ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ပတ်ပတ်လည်” ရပ်တည်ချက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
HZ သည်စနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောစည်းရုံးရေးမှူးများအပြင်သုတ်ဆေးများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမှုများနှင့်အခြားအရာများအတွက်နံရံချိတ်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုလည်းစီစဉ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးတွင်၊ အောက်ပါလင့်ခ်တွင်ရနိုင်သောရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် www.hobbyzone.pl သို့လည်းလာလည်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်းလာမည့်အပိုင်း၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်ဒယ်လ် desktop နှင့်ဖော်ပြချက်နှင့် HZ ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆိုပြုချက်ကိုသွားပါမည်။ ပန်းချီကားများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
HZ-sdm2 - ပန်းချီကားများနှင့်မော်ဒယ်များကိုပန်းချီဆွဲရန်အတွက်ကြီးမားသောစားပွဲတစ်ခု
တင်ပြထားသောဇယားသည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်၊ ၀ ါသနာဇုန်မှပေးထားသောအရွယ်အစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တင်ပြထားသောတစ်ခုမှာအရွယ်အစား ၅၅ စင်တီမီတာမှ ၃၅ စင်တီမီတာ x ၆ စင်တီမီတာရှိပြီးကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှိသေးငယ်သည့်မော်ဒယ်လ်ထောင့်ရှိရပ်နားရန်နေရာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းဟာတူရိယာနှင့်အရေးအပါဆုံးစုတ်တံသို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်များအတွက် cutouts နှင့်အတူအဆင့်နှစ်ဆင့် extension ကိုလျှက်ရှိပါတယ်အပေါ် laminated HDF ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ရွေးချယ်ရန်အတွက်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ကြာရှည်စွာဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဆေးသုတ်ဆေးသုတ်ဆေးများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများအားအထူးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PLN ၁၀၀ ခန့်အခမဲ့ရရှိသော desktop တစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်သည် https://sklep.modelarskiswiat.pl/pl/p/Duzy-stolik-do-malowania-figurek-i-modeli/124650
အရွယ်အစား ၃၆ မီလီမီတာရှိသော Tamiya နှင့် Mr. ဝါသနာပါသည့်အပြင်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအတွက် ၃၅ မီလီမီတာပုလင်း၊ washအီးအဖြစ်အိပ်ပျော်။ တန်းနှစ်ခုစလုံးမှာဒီအမျိုးအစားပုလင်း ၃၂ လုံးလောက်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ Vallejo၊ AK Interactive သို့မဟုတ် Ammo တို့မှသူတို့၏သုတ်ဆေးများကိုရောင်းချသောပုံမှန် ၁၇ မီလီမီတာပုလင်းများအတွက် ၂၆ မီလီမီတာဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှထုတ်ကုန်များကိုသုံးလျှင်ကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပဲ။ ငါပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရွေးလိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုလင်းသေးသေးလေးတွေနဲ့သာကန့်သတ်မထားချင်ဘူး။ ဗားရှင်းရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းကိုအခြား HobbyZone စင်တာများနှင့်ချိတ်တွဲများအတွက်လည်းရနိုင်သည်၊ ၎င်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ စားပွဲမှာငါစတုရန်းပုလင်းထဲမှာပေါ်ပြူလာ Tamiya ကော်အတွက်ထစ်တစ်ချောင်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပေါက်တွေကိုအံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်မော်ဒယ်လ်တော်တော်များများကသူတို့ကိုသုံးကြတယ်။ HZ - ဒါကိုစဉ်းစားပြီးအတန်းတစ်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးအနားတစ်ဖက်ကိုစတုရန်းအပေါက်တစ်ပေါက်လုပ်ရမယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ တာကာမှလူကြိုက်များသောစတုရန်းပုလင်းများအတွက်သီးသန့်နေရာမရှိပါ။ အလွန်ပါးလွှာသောသို့မဟုတ် Mark Fit သည်လိမ်နေသောနေရာတွင်ရှိနေရမည်။
ဖိုင်တွေအတွက်စတုဂံ cutouts ရှိပါတယ်
အရေးအပါဆုံးဓာတုပစ္စည်းများအတွက် oblong "အံဆွဲ"
၃၆ မီလီမီတာဗားရှင်းသည် ၃၅ မီလီမီတာပုလင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်
တွင်းသေးသေးလေးများသည်တုတ်နှင့်သွားတိုက်တွင်“ ကျပ်” သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်
ငါ့ပစ္စည်းကိရိယာ။ ဘောင်နဲ့ဘုတ်တံတွေအတွက် module ကိုကျွန်တော်ရပ်တည်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာလေဝင်လေထွက်စနစ်ရှိတယ်။
အမည်ဖြင့်စားပွဲသည်ပန်းချီကိုရည်စူးထားသော်လည်း၎င်းကိုမော်ဒယ်လ်တိုင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ကော်၊ ဥပမာအားဖြင့်ကော်၊ စျေးတွင်ရရှိနိုင်သည့်မော်ဒယ်လ်ဖျာများရှိသော်လည်း၎င်းတို့တွင်လက်ကိုင်မရှိပါ။ တင်ဆက်ထားသည့်ဇယားသည်သင့်အားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အလွယ်တကူဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီးအရာအားလုံးကိုလျင်မြန်စွာဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ စားပွဲတင်၏နှစ်ဖက်အပေါ်ကိုင်ဆောင်သူ။ ငါထောင့်မှာရှိတဲ့ခွက်ကိုင်ကိုင်ထားသူတွေကိုကြိုက်တယ်၊ ဥပမာပလတ်စတစ်ခွက်တွေအပြင်ဖြီးဆေးခြင်းအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အပြင်၊ ဥပမာအလတ်စားကော်ဖီခွက်နှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။ ဒါကငါ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပျော်စရာကောင်းနေတုန်းနွေးထွေးနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငုံကြည့်ချင်တယ်။ Hobby Zone မှပုံစံပြုသူအတွက်စားပွဲခုံတွင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အတောင်များတပ်ထားသည်။ သူတို့ကဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်၊ ငါသူတို့ကိုမသုံးတော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီစားပွဲပေါ်မှာငါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအတွက်ငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရပ်ကွက်နဲ့မကိုက်ညီဘူး။
ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်စကားလုံးတစ်လုံးသည်လည်းအသုံးပြုသောလမိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် mat ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကောင်းမွန်စေသည်၊ ငါတို့ကဲ့သို့မော်ဒယ်လ်ဖိုရမ်များသို့မဟုတ်အုပ်စုများတွင်တိုးတက်မှုကိုတင်ပြလိုသောမော်ဒယ်လ်အမျိုးအစားဖြစ်လျှင်အရေးကြီးသည်။ "Modelarski Świat - မော်ဒယ်လ်နှင့်ရာသီဥတုကိုနှစ်သက်သူများ၏အုပ်စုတစ်စု" ။ သပ်ရပ်။ အဖြူရောင်နောက်ခံရှိအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဓါတ်ပုံများသည်မော်ဒယ်လ်တွဲဖက်ပစ္စည်းများပါသည့်တိုင်ဥပမာအားဖြင့်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ်အိပ်ရာနောက်ခံရှိဓာတ်ပုံများထက် ပို၍ ပညာရှင်ဆန်သည်။ သင်၏ကြည့်ရှုသူများအပေါ်ကောင်းမွန်သောစွဲမှတ်စေရန်ဤအရာကိုစိတ်ထဲထားပါ။ စားပွဲထိပ်သည် acetone နှင့်လောင်းသော acrylic ဆေးသုတ်ခြင်းကိုခံနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုကိုအောက်ပါဓါတ်ပုံများတွင်ထွက်သယ်ဆောင်။ Desktop ကိုသန့်ရှင်းအောင်မှတ်သားထားသင့်ပြီး၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စမ်းသပ် laminated တောင်ပံ
ငါသူတို့ကိုပုံမှန် acrylic မော်ဒယ်ဆေးသုတ်လောင်းသည်
ဆေးသုတ်ထားသောအမှတ်အသားကို acetone-based အလှကုန်ပစ္စည်းဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
HZ-pg1 - ကိန်းဂဏန်းများနှင့်မော်ဒယ်များအတွက်ကိုင်ဆောင်ထားသူ
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနှင့်၊ နောက်ခံပုံသည်ပုံဖော်သူများအတွက်အဓိက ရည်ရွယ်၍ အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုင်ဆောင်ရန်အတွက်အလွန်ဒီဇိုင်းဆန်းပြီးဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ PLN 90 နီးပါးဖြစ်သော်လည်းအလွန်တိကျမှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်ကုန်ကျစရိတ်များစွာရှိသည်။ https://sklep.modelarskiswiat.pl/pl/p/Uchwyt-do-Figurek-i-Modeli/124639 ။ စိတ်ကူးသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အကျင့်နှင့်တူသည်။ အဖုကိုဘယ်ဘက်သို့လှည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် MDF ပြားနှစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်မှုကိုသော့ခတ်လိုက်သည်။ max5မီလီမီတာကိုဤနေရာတွင်မှတ်သားပါ၊ ညာဘက်သို့လှည့်ပါကထည့်သွင်းထားသောအရာဝတ္ထုကိုညှပ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဘာမှိုကိုမေးမလဲ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, figurine ကိုပထမ ဦး စွာတူးရမည်၊ ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်သွားတိုက်ပေါ်တွင်ကပ်ရမည်၊
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အကောင်းဆုံးပန်းချီကားသည် ၁.၃၅ စကေးရှိသောပုံ၏မျက်နှာပင်သေးငယ်သည့်အတွက်လက်နှစ်ဖက်လုံး၏မှန်ကန်သောတည်ငြိမ်မှုသည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးတစ်ရုပ်နှင့်ပန်းချီကိုင်ထား။ စိတ်ကူးသည်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ Gadget သည်ဤလုပ်ငန်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သဘာဝကျသည့်သားရေလက်ကိုင်နှင့်ထူထပ်သောလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသောအရာဝတ္ထုကိုသင်၏လက်တစ်ချောင်းလုံးကိုင်ထားနိုင်ပြီးလက်နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်သာအာရုံစူးစိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါချုပ်ကိုင်ပိုပြီးလုံခြုံသည်နှင့်ခြယ်သအစိတ်အပိုင်းတုန်ခါပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြီးကိုင်ထားသည့်အရာကလိုချင်လျှင်ထိန်းချုပ်မှု၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ၎င်း၏ထောင့်မှန်စတုဂံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုပ်ကိုင်မှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးကောင်တာပေါ်တွင်တင်ကာဘယ်ဘက် (အများအားဖြင့်) လက်ကိုလုံးဝသက်သာစေပြီးလက်ျာဘက်တွင် (ကူရှင်ချုပ်သည်ခဲယဉ်းပြီးတည်ငြိမ်သည်) နှင့်ဆေးသုတ်နိုင်သည်။ အပြည့်အဝတည်ငြိမ်လက်။ တစ် ဦး ချင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလွန်တိကျသောပန်းချီကားအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ထောင့်နှင့်အနေအထားကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအနေဖြင့်၎င်းမှတစ်ဆင့်ဝက်အူကိုဖွင့ ်၍ ပူးတွဲပါသောဒြပ်စင်ကိုလှည့်ရန်အချိန်နှင့်အမျှလိုအပ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်ချိန်ညှိပြီးသင်နည်းနည်းတွက်ကြည့်ရမယ်၊ ဘေးထွက်ကနေဝါယာကြိုးဒါမှမဟုတ်သွားတိုက်တံကိုထည့်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အနည်းဆုံးတော့ဒါကလက်နှစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာထားခြင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကြီးမားပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောဘီးသည်လျင်မြန်စွာသက်တောင့်သက်သာရှိစွာလည်ပတ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တတိယရွေးချယ်စရာကတော့ပူးတွဲပါတဲ့ရပ်တည်ချက်ထဲမှာချုပ်ကိုင်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လက်ထုပ်ပေါ်ကို မူတည်၍ ၎င်းကို perpendicularly (သို့) အနည်းငယ်ထောင့်မှာထားလိမ့်မည်။ သင်ဤနည်းကိုပန်းချီဆွဲ။ ဆွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်၎င်းသည်လေဘရပ်နှင့်ပန်းချီဆွဲခြင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကအရမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ပိုကြီးတဲ့ဒြပ်စင်တွေကိုအောင်မြင်စွာတပ်ဆင်နိုင်လို့ပါ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့နည်းလမ်းရှာမယ်ဆိုရင်။ ပုံစံနှင့်မကပ်မီကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပန်းချီဆွဲသောသံချပ်ကာသူများအတွက်လက်ကိုင်သည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ - ဂေါ်ပြားကိုအစွန်းနှင့် ကပ်၍ တင်းကျပ်လိုက်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရပ်တည်ချက်သည်ခြယ်သထားသည့်ဒြပ်စင်ကိုအခြောက်လှန်းရန်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ဒီလိုပစ္စည်းမျိုး ၀ ယ်သင့်လား။
အကယ်၍ သင်သည်ငါကဲ့သို့သော gadget တစ်ခုသို့မဟုတ်ပန်းချီကားများကိုအဓိကပန်းချီဆွဲသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။ သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကိုင်လက်ကိုင်ကိုကိုင်ရုံဖြင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကို ... ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုပေးသည်။ အိုကေ၊ ဒီဟာကစကားလုံးကြီးလွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကပန်းချီကားရဲ့အထွေထွေပစ္စည်းတွေကိုပိုပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းစေတယ်၊ ​​ဒါကဝါသနာပါတာကပျော်စရာကောင်းတယ်။ သင်ဤပစ္စည်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မလားသို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထောင့်တစ်နေရာ၌အဆုံးသတ်မည်လားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်အားအတိအကျပြောရန်ခဲယဉ်းသည် - လူတိုင်းတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျင့်များရှိသည်။ ငါမူကားအလွန်ကြီးသောအရာ၊ ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေသောသေးငယ်သည့်အရာ။ ငါသည်လည်းရိုးရှင်းစွာအမြင်အာရုံ ... ကြိုက်တယ်။
ထုတ်လုပ်သူကိုချီးကျူးသင့်သည်အတိုင်းငါပြန်လည်သုံးသပ်၏ဤအပိုငျးရည်ရွယ်ချက်, အဆုံးအဘို့အထားခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးကိုအလွန်ထူထပ်စွာပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီးထုပ်တစ်ခုစီ၏အတွင်းပိုင်းသာမကဘဲအပြင်ဘက်မှအထုပ်တစ်ခုလုံးကိုပတ်ထားသည်။ ငါထုပ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေအလွယ်တကူလွှင့်ပစ်နိုင်ပြီးဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အရေးမပါပုံရသော်လည်း၎င်းအားကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ယူသည့်ပရိဘောဂများကိုဖြုတ်သည့်အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကိုယ်ပိုင်စုဝေးမှုအတွက်သီးခြားပြား၏ထောင့်ကျိုးနေသောမြင်ကွင်းများကိုမြင်သူတိုင်းကတန်ဖိုးထားကြလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ စည်းဝေးပွဲနဲ့ဘယ်လိုနေလဲ။
ထုတ်လုပ်သူရဲ့လိုဂိုပါတဲ့စတစ်ကာမျိုးစုံ - ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်း။
စတစ်ကာများကိုကပ်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ Plus အား HZ မှာသူတို့ကိုပေးသည်။
ပြီးတော့သူတို့ကို, ထူထောင်ထုပ်ပိုးအစိတ်အပိုင်းများ Self- စည်းဝေးပွဲကို။
modules များကို MDF နှင့် HDF board များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် (HDF သည်အဖြူရောင်အထူနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်) MDF သည်အပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားပြားများနှင့်မြေမှုန့်သစ်သားများနှင့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအရာကြောင့်၎င်းတို့သည်ခက်ခဲပြီးအကြမ်းခံသော်လည်းထိတွေ့မှုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် chipboard (သို့) အထပ်သားများထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား၊ အလေးအနက်ထားရလျှင် HZ ပရိဘောဂ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအသွင်အပြင်ရှိသော်လည်းအတော်အတန်ခိုင်မြဲပုံရသည်။
ငါဆန္ဒရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်အလွှာမရှိသောပျဉ်ပြားများကိုကြည်လင်။ အရောင်တင်ဆီဖြင့်ဆေးကြောသင့်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါကဒီထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းကိုငါသိ၏။ ဆေးကြောထားသော MDF သည်ကော်နှင့် ကပ်၍ ပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပရိဘောဂများကိုရေမှုန်ရေမွှားဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည် - နှစ်အနည်းငယ်ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။
ကော်အဘို့အ screw နှစ်ခု
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည်ကိုယ်တိုင်စုဝေးရန်လိုအပ်သည်၊ ဒြပ်စင်အရေအတွက်သည်သေးငယ်ပြီးပူးတွဲပါညွှန်ကြားချက်များအကူအညီဖြင့်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ရန်ရိုးရာပရိဘောဂများ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်သစ်သားကိုတောက်ပသောကော်နှင့်အတူတကွကော်။ ကောင်းလားဆိုးလား? MDF သည်ကော်ကိုကောင်းစွာကိုင်ထားသော်လည်းအထူးပြုလုပ်ထားသောတူးဖော်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ထုတ်လုပ်သူအားအရာနှစ်ခုကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာစုဝေးခံရဖို့ပြား၏အထူ။ စားပွဲတစ်ခု၏မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့သေးငယ်သည့်နေရာများအတွက်ရည်စူးထားသောစနစ်များအနေဖြင့်စင်တီမီတာအနည်းငယ်စီတိုင်းသည်ရွှေနှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ ထုတ်လုပ်မှုသည်တဖန်ကုန်ကျသည်။ ဤအချက်ကြောင့်သူတို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းကမျှတတယ်။ သူတို့က module တစ်ခုနှုန်းအများအပြားဒါဇင်အတော်ကြာ zlotys ၏ပမာဏထက်ကျော်လွန်။ ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ, အလုပ်ခွင်ကို personalize, ဤမျှမျှတတစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ကျိုးနပ်ပါသလား ကျိန်းသေဟုတ်တယ်။ အထူးသဖြင့်အိမ်ခြံ၌တည်၏။ Bravo HobbyZone ။
MDF ပျဉ်ပြားများ၏အထူသည် ၆ မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။ လုံလောက်သော, artificial တပြင်လုံးကိုထူမထားဘူး။
ဤသည်မှာပေါင်းစပ်ခြင်းမပြုမီ tool module တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကော်ပို neater, ပိုကောင်း။
အံ့သြစရာက sc ကြောက်စရာမလိုခဲ့ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်ထုတ်ပေးသောပစ္စည်းများအတွက် HobbyZone ကုမ္ပဏီအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ငါပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့နောက်အတွေးအခေါ်တွေကိုစပ်စုတယ်။
ရှေ့သို့ ယခင် post: ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုချီးမြှင့်မှုကိုတိုးမြှင့်နေကြသည် - IBG Models သည်စပွန်ဆာများနှင့်ပူးပေါင်းသည်။
နောက်တစ်ခု: နောက်တစ်ခု ငါတို့ဘာလဲ အဘယျသို့မော်ဒယ်တင်ဆက်နိုင်သနည်း
ငါ OM07 ကိုသုံးတယ်။ နောက်တစ်ခါခေါက်လိုက်ရင်စင်စင်တာမီတာလောက်ရှိတဲ့အပေါက်တွေနဲ့အနိမ့်ဆုံးအဖြူရောင်ဒြပ်စင်ကိုထုတ်လိမ့်မယ်။ ကိရိယာတွေကပိုပြီးတည်ငြိမ်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာများစွာကိုထိန်သိမ်းထဲတွင်ထားခဲ့ပါက၎င်းတို့သည်တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်းနောက်တွင်ရပ်။ မသက်မသာဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာတကယ်တော့ပါပဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါလိုအပ်ထက်များစွာသောပိုပြီးတွင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါကမှပါး။ သို့တိုင်ပိုနည်းသည်ထက်ပိုကောင်းသည်😉
Stefan N ကို သူကရေးသားခဲ့သည်:
တစ် ဦး ကအလွန်လိုက်ဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်။ ခံနိုင်ရည်ကောဘယ်လိုလဲ။